NISA iyo Deni oo dagaalo toos ah ku dhaxmarayo Boosaaso, iyo Taliyihii PSF oo NISA ku biiray. | Arrimaha Bulshada
Home News NISA iyo Deni oo dagaalo toos ah ku dhaxmarayo Boosaaso, iyo Taliyihii PSF oo NISA ku biiray.
Bulsha:- Dagaal galay maalinti labaad ayaa ka socda Boosaaso, wararka dhimashada, dhaawaca iyo barakaca waxaa barbar socda xogaha hoose ee ku saabsan sababta iyo dhinacyada dagaalka laga helayo.
Doorashada Soomaaliya ee socta mudada ka badan sanad ayay tani u noqoneysaa caqabad kale, horay deegaanada doorashada ee adag waxay ahaayeen Gedo iyo Hiiraan, gobolka Bari, magaalada Boosaaso ayaa hadda liiska soo galay.
Dadka sida dhaw ula socda dhaqdhaaqyada doorashada ee kooxda Farmaajo ayaa sheegaya in Korneel Cabdullahi Dheere uu doonayo laba midood, waa tan koowaade inuu toos awood ugu sheegto oo uu maamulo doorashooyinka lagu qabanayo Garbahaareey, Baladweyne iyo Boosaaso, ama tan labaad oo ah haduu sidaas waayo inuu fashiliyo guud ahaan doorashada.
Madaxweynaha Puntland iyo mas’uuliyiintiisa maamulka ayaa laga sugayaa tilaabada ay qaadaan, iyadoo todobaadyo ay magaalada Boosaaso go’doon, dagaal iyo xaalad hubanti la’aan ah ugu jirto taliyihii PSF ee diiday xilka laga qaaday isagoona taageero dhanka NISA ah helaya.